तीजमा ब्रत बस्नुको फाईदा र बेफाइदा यस्ता छन् ! जानी राख्नुहोस « Sajha Page
तीजमा ब्रत बस्नुको फाईदा र बेफाइदा यस्ता छन् ! जानी राख्नुहोस
प्रकाशित मिति: September 12, 2018
काठमाडौँ,२७ भदौ । हिन्दु नारीहरुको महान चाड तिज आज बुधबार देशभर मनाई रहेका छन् । नजिकको मठ मन्दिरमा दर्शन गर्ने महिलाहरुको भिड नै लागेको छ ।
बिशेष गरेर रातो कपडामा गरगहनाले सुसज्जित महिलाहरु भगवान शिवको ब्रत बसे श्रीमानको आयु लामो हुने र अविवाहित महिलाले राम्रो पति पाउनेभनाई छ ।
ब्रत बस्दा महिलाहरुले पानी पनि नखाई व्रत बस्ने चलन छ । जुन स्वास्थ्यको लागि एकदम नराम्रो मानिन्छ । एक हप्तामा एक दिन खाना नखाई बस्नु सबैको स्वास्थ्यको लागि लाभदायी राम्रो मानिन्छ जसले पाचन प्रक्रियालाई आराम मिल्छ र राम्रो गर्छ ।
तर भगवानका नाममा दिनभर एक थोपा पनि पानी नपिई ब्रत बस्नु स्वास्थयको लागि हानीकारक मानिन्छ । पानि गुस,फलफुल खाएर ब्रत बस्नु राम्रो हुन्छ । जसले गर्दा तौल घटाउन,मधुमेह,उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न ठुलो सहयोग गर्दछ ।
एक दिन मात्रै नभई हप्ता,महिना सम्म पनि केहि नखाई ब्रत बस्ने चलन छ । यस्तो किसिमको ब्रतले झन शरीरलाई कम्जोर बनाई विभिन्न रोगको शिकार समेत हुने डर हुन्छ । रक्तचाप गडबडी हुने कम्जोर महसुस हुने भित्र अंगहरुमा समेत असर पर्ने हुदा अवाश्यताका भन्दा बढी ब्रत बस्नु राम्रो मानिदैन ।